ဘာသာပြန်ဆိုသူ, စာသားနဲ့ web စာမျက်နှာများတွင် 100% အခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဘာသာပြန်ဆိုသူ, စာသားနဲ့ web စာမျက်နှာများတွင် 100% အခမဲ့
ဘာသာပြန်ဆိုသူ, စာသားနဲ့ web စာမျက်နှာများတွင် 100% အခမဲ့ APK ကို
ဘာသာပြန်ဆိုသူစာသားနဲ့ web စာမျက်နှာများတွင် 100% freeWhen ကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားလာ, သင်သည်သင်၏ဘာသာစကားမပြောတတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းဘာသာပြန်ဆိုရန်လိုအပ်သည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကား system ကိုစံနမူနာဘာသာပြန်ချက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းမထားဘူးသူတစ်ဦးနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစည်းအဝေးတွင်များမှာ!
ရိုးရှင်းစွာအသငျသညျဘာသာပြန်ဆိုနှင့်ဘာသာစကားများ Translator ကြွင်းသောအရာလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချင်သောဘာသာစကားရိုက်ထည့်သို့မဟုတ်စကားမပြောတတ်။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်စကားသံကိုအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာသင်သည်စုံလင်စူပါအစာရှောင်ဘာသာပြန်ချက်များကို get ကူညီပေးသည်။
- 50 ဘာသာစကားများထက်ပိုမှဝဘ်စာမျက်နှာများကိုဘာသာပြန်စာပေ!
- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသာမှဒီဇိုင်းနှင့်အရောင် Configuration interface ကို။
- Bookmark သင့်ရဲ့အများဆုံးအသုံးဘာသာပြန်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ။
- အသံဖြင့် Translate ။ သငျသညျအလိုအလြောကျဘာသာပြန်ဆိုရန်လိုအပ်သောအရာကိုအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ
- သန့်ရှင်းဂရပ်ဖစ်များနှင့်တစ်ဦးလွယ်ကူသော interface ကို
- အလွန်မြင့်မားတိကျစွာနှင့်အတူစကားများနှင့်စာပိုဒ်တိုများ Translate ။
- ဆုနှင့်အတူ္တွတန်ဖိုးမရြိ apps များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကောင်းဆုံးကိုတိကျမှန်ကန်ဘာသာပြန်ချက်အဖြစ်လက်ခံရရှိ!
- ထက်ပိုမို 42 ဘာသာစကားများမှ Translate
translator, စာသားနဲ့ web စာမျက်နှာများ
ဘာသာပြန်ဆိုသူ, စာသားနဲ့ web စာမျက်နှာများတွင် 100% အခမဲ့
စမတ် Lighting - ...
ဘာသာပြန်ဆိုသူ Foto - ...
ဇန်နဝါရီလ 11, 2019 မှာ 1: 02 နံနက်